nepaldoor.com: ९ महिनामा १० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
-डिआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल-
प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख छन् प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल । गत कात्तिक १९ देखि महाशाखा प्रमुख भएर आएका डिआईजी अर्यालले उपत्यकाको ट्राफिकमा छलाङ नै मारेका छन् । २०४३ फागुन ३ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका अर्याल प्रहरी अधिकृतहरुबीच आर्थिक पारदर्शी उपमा लिइन्छन् । धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, भक्तपुर, अपराध महाशाखा, बागमती, जनकपुर अञ्चल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख भइसकेका उनी आगामी कात्तिक २९ गते वर्तमान प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना उमेर हदम्यादका कारण अनिवार्य अवकास पाएपछि आईजीपी बन्ने प्राय पक्का छ । वरियतामा पहिलो नम्बरका र कार्य क्षमतामा पनि अब्बल मानिने अर्यालसँग उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, सुधार र गर्न बाँकी कामका विषयमा नेपालडोर डट कमका लागि सुरेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि केके काम गर्नु भयो ?
म गत कात्तिकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख भएर आएपछि केही सुधारका प्रयास गरेको छु । जनमानसमा सबैभन्दा बिझेको ट्राफिक प्रहरीको आचरण थियो । सबैले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । मैले पहिलो प्राथमिकता ट्राफिक प्रहरीलाई आचरण सिकाउनु पर्ने थियो । ट्राफिकमा खटेका एक हजारबढी प्रहरीलाई निरन्तर आचरण सिकाइयो । अहिले जनस्तरबाट ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको अनुभव आउन थालेको छ ।
ट्राफिकको आचरणसहित आर्थिक पारदर्शितामा पनि केही सकारात्मक काम भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयका कर्मचारी, ड्राइभिङ स्कुलका सञ्चालक, बिचौलियासँग मिलेर ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणबाट लिने अबैध रकम प्राय रोकिएको छ । महाशाखामा पनि आर्थिक पारदर्शिता अपनाइएको छ ।
चालक अनुमतिपत्र वितरणमा केके सुधार भए ?
गत कात्तिकदेखि चालक अनुमतिपत्र पाउन लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षामा सुधार गर्दै १० वटा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । विगतमा ९० प्रतिशतले अनुमतिपत्र परीक्षा उतीर्ण गर्नेमा अब १० प्रतिशत पनि उतीर्ण हुन छोडेका छन् । यसको अर्थ दक्ष चालकले मात्र परीक्षा उतीर्ण गरेका छन् । अनुमतिपत्र पाउन मिलेमतोमा मोडिफाई गरेका स्कुटर, मोटरसाइकल र कारको प्रयोग हुने गरेको रहेछ । प्रतिघण्टा ४÷५ किलोमिटर गतिमात्र गुड्ने मोडिफाई गरेर बनाएका त्यस्ता साधन र सञ्चालकलाई कारवाही गरिएको छ भने जुन साधनको अनुमति पत्र लिने हो त्यहीबाट परीक्षामा सहभागी बन्नु पर्ने नियम बनाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्दै रोड टेष्ट ड्राइभिङ पनि सञ्चालन तयारीमा छौं ।
भाडाका ट्याक्सीले यात्रु ठग्ने गरेकोमा के कारवाही भए ?
जनमानसबाट यस विषयमा पनि गुनासा आएकै हुन् । हामीले अर्थिङ गरेर भाडामा हिड्दा बढी रकम उठाउने ट्याक्सीका मिटर जफत गरेका छौं । त्यस्तो पाएमा चालकलाई पनि कारवाही गरेकै छौं । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा आरक्षण सिटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन किन ?
ट्राफिक प्रहरी नभएको स्थानमा सवारी चालकले ट्राफिक नियम पालना नगरेकै कारण सडकका चोकचोकमा सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी खटाएको हो । यसले चालकको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राम्रो काम गरेको छ ।
तत्काल गर्नु पर्ने काम भइरहेका छन् । अब जनचेतना फैलाउने अभियान चलाउने लक्ष छ । सडक दुर्घटनाबाट सबैलाई बचाउन, सडकको जम कम गर्न, गन्तव्यमा समयमै पुग्न र सवारी साधनकै कारण आर्थिक ठगीबाट बच्न जनचेतना आवश्यक छ । हामी उपत्यकाका सबै घरमा जनचेतना विस्तारको कार्यक्रम लिएर जाने तयारीमा छौं ।
ट्राफिकमा भएका सुधारका कारण राजश्वमा कति वृद्धि भएको छ ?
गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । वर्षभरमा १२ करोडबढी राजश्व संकलन हुने देखिन्छ ।